Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoProtests AKKAATAA DIDDAA LEENJII BARSIISOTAA
#OromoProtests AKKAATAA DIDDAA LEENJII BARSIISOTAA
(By Jawar Mohammad)
Akkuma yaadatamu kaleessa 'leenjii' barsiisotaa bor Fulbaana 4, eegalu bifa kamiin diddaatti jijjiruu qabu kan jedhurratti yaada akka kennan affeerree turre. Barsiisonnis dhibbataman yaada isaanii ifaafi gara keessaatin nuuf laatanii jiran. Galatoomaa jennaan. Yaada isaanii cuunfinee tooftaa hundarra filatamaati jennu asitti dhiheessina. San dura garuu walgahiin kun maalif mormamuu qaba kan jedhu ifa gochuun barbaachisaadha.
1) Walgahiin kun akka maqaa 'leenjii' barsiisonni oogummaa isaanii itti gabbifataniin osoo hin taane waltajjii haala yeroo irratti paartiin biyya bulchaa jiru olola itti geggeessuudha. Kana ammoo muuxannoo amma duraatifi barruulee leenjii kanaaf qophaayan irraa ifatti hubachuun ni danda'ama. Kanaaf faaydaan sirna baruufi barsiisuu fooyyeessuuf walgahii kanarraa eeggamu hin jiru.
2) Wayyaaneen rakkoo siyaasaa biyyattii mariin osoo hin taane qawween furuudhaaf filattee jirti; filannoo kanas lammiilee biyyattii 1,000 ol ji'oota 10 keessatti ajjeessun, akkasumas dhaadannoo qondaalonni ishee tibbana godhaniin mirkaneessitee jirti. Waan kana ta'eef marii barsiisota waliin godhamu kanarraa wanti rakkoo siyaasaa biyyttii furuuf gargaaru homaatuu hin argamu.
3) Walgahiin kun qondaalota DhDUOtin geggeeffama. Namoonni kuniifi jaarmayanii isaanii ammoo gaaffilee barsiisonni kaasan deebisuufis ta'ee yaada isaan kennatan hojiitti hiikuuf aangoo homatuu hin qaban. kanaaf ragaan salphaan koree hojii raaw'achiiftuu DhDUO Maastar Pilaaniin guutumatti akka hafu murteessine jedhanii ummatatti yoo himanis , qondaalonni Wayyaanee Abbaa Xaayyeefi Barakat Simoon torbaanuma kana “Maastar Pilaaniin hin haqamne, yeroof tursiifame malee” jechuun, qaamni ol'aanaa DhDUOtu aango takka akka hin qabne irra deebi'anii mirkaneessanii jiran.
Kanaafuu walgahiin ololaa kun mormamuu qaba. Garuu mormiin godhamu tooftaa xiinxala bu'aafi miidhaa (cost benefit analysis) madaala keessa galche irratti hundaa'u qaba. Barsiisotas kan mari'achiifneef kanuma sababni. Filannoole sadan dhihatan irra irrajireessi barsiisota bifa armaan gadiitin madaalan.
1) Walgahicha irraa hafuu ( boycott): Kuni gaarii ta'ee osoo jiruu barsiisota adabbii mindaafi hojirraa ari'amuutiif saaxila (keessattu yoo hundi kan hirmaanne tahe)
2) Walgahiirratti hirmaachuu garuu gara waltajjii kan gaaffiifi yaanni qabsoo itti calqifamutti jijjiiruu: Kun kan nama hawwatu ta'us sababoota adda addaaf faaydaarra miidhaatu caala. Gaafis ta'e yaanni ummataa mootummaan sun hanga ammaatti hin dhagayin hin jiru, furuudhaaf humna (OPDO) ykn fedhii (TPLF) dhabuu malee. Inumaatuu gaafilee dhihataniif mummuranii fudhatanii miidyaan dabarsuuf akka sirni dimoraasii jiruu fakkeessuuf isaan fayyada. Irra caalatti garuu waltajjii kanarratti gaafilee kaasuun barsiisota ciccimoo adda baafatanii booda akka rukutaniif saaxiluu ta'a. Kun ammoo qabatamaan amma duras ta'ee jira.
3) Walgahitti hirmaachuu garuu yaadas ta'ee gaafii kaasuu dhabuu ( silent protest): Kun hundarra filatama. Barsiisota balaa kamiifuu hin gaaga'u ( zero cost). Irra caalaatti caldhisuudhaan dubbii garatti qabatanii diina garaa raasuuf ( psychological terror) fayyada. Dabalataanis akkuma beekkamu waltajjii akkanaa keessa namoota sirnichaaf hojjatan kan garuu fakkeesitota dubbii afaanii nama baasuuf dubbatan (provocateurs) ni seensisu. Kanaaf gamtaan caldhisuun fakkeessitoota akkasii adda baafatanii gara fuulduraa ofirraa tiiksuuf fayyada. Kanaafuu boru ganamarraa kaasee barsiisonni hundi walgahirratti akka hirmaatan gorsina. Walgahicha irratti obsaa fi tokkummaan caldhisaa. Akkuma gaafileen isin amma dura kaaftaniifi sammuun barattota isin qartanii sirna kana raase, sagalee keessan dhoorgachuun daran sirnicha mala wallaachisa.
Tokkummaan caldhisaa diinaa garaa raasaa!!
Posted by Hasan Ismail at 10:36 AM
Unknown September 13, 2016 at 12:42 PM
Jawaar yaada kee armaan oliif baay'ee galatoomi!
Miseensonni Wayyaanee/TPLF akka barbaaddeeti waan barbaadde yoo godhattu,garuu lammiin biyyatii kan akka Barsiisotaa utuu hojii barsiisummaa akka malee dadhabsiisaa hojjatanuu jireenyaan garuu gadadoo keessaa jiraatu.
Kanaaf Barsiisonni daballii mindaa gaafatachuus qaban.
Mootummaa tokko jilbeefachisuuf, gaheen Barsiisoni qaban ol-aanaadha. FKN Biyya keeniyaatti Gamtaan Barsiisota biyya keeniyaa waa'ee mirga Barsiisotaa ilaalchisee,barsiisota bakka bu'uun ,socho'ee sochoosuun akka dhaaba mormituutti mirga barsiisotaf hojjata.Mirgoota akka daballi mindaa fi fayyidaa addaa addaa barsisonni argachuu qabaniif argamsiiseera. FKN bara 2015 kessaa daballii minda dhibbantaa 300(300%) n akka dabalamu Commishinara Tajaajila Barsisosata Keeniya(Dhaabbata Mootumaa)f gaafii mirga daballii mndaa gafachuun yeroo mootummann gaafii saaniif deebii lachuu didutti Gamtaa barsisoota kanaan qajelfamuun hirrii nagaa biyyyooleessaa yaamuun barssisoonni biyatti hundi akka hojii barsiisummaa dhaabani,manneen barnoota hundi barsiisota dhabuun ni cufaman. Hiriira yeroo ji'a tokkoof sanaa oliif godhameen booda motummaan utuu hin jaalatiin gaafii barsiisota kana walii-galteen hiikuuf gamtaa barsiisotaa waliin walii galtee mallatteessuun mindaa jedhamee kana dabaluuf dirqame.
Barsiisonni tajaajiltoota uummataati malee kan gartuu dhaaba siyaasaa biyyaa bulcituu miti. Barsisonni utuu gamtaa qabaatani dhabbata of danda'eedha.Kan Tajaaila uummata saaf dursa kennee akkasumas mirgaa ofiif qabsa'uudha. Laali barsiissonni Oomiyaa guutuu keessaatti utuu waanni biraa haa hafu mana barumsaa irraa hafuun kuutaa seenuu didani DHDUOn/TPLF eessaa abbaa shii lixxi? Sochiin baruu fi barsiisuu dhaabbachuun/ barsiissooni mana barumsaa irraa hafuun wayyaannee kan udduu ishii dhaabsisuu ta'a.Dhugaatti Barsiisonni keenya dhabbata/Teachers union isaan bakka bu'ee mirgaa saniif falmee falmachachiisu hin qaban kun immoo dhaabbata of dandeessuu/independent institution TPLFn nu dhabsiisteedha.Ta'uiillee barsiisonni carraaqqii gochuu qaban, falmachuu qaban,gahee guddaa taphatu wayyaanee jilbeefachiisuu keessaatti.
Bara harayaa kana irratti Barsiisoonni daballii mindaa fi taajailaa barsiisaan tokko argachcuu qabu gaafachuun mirgaa saanif falmachuun qaama qabssoo uummataat. Yoo tarii walga'ii DHDUO/TPLF irratti hirmatu ta'an waa'ee daballiimndaa kan wayyanneen kanfaluu hin dandeenye qaboo qabsiifachuu ajenda walga'ichaatti akka dabalamuuf al-duree tokko malee gaafachuu qabu. Barsisonni qoqqophii barsiisuu dhaabuu/Teaching boycott until salary increased by some percentage( Eg. 100% or 150% or 200%)
Beware of TPLF's minority card
Kaardii Wayyaaneen maqaa sab-bicuuleetiin taphacha...
#OromoProtests Qananiisaa Baqqalaa ummata isaatiif...
Fakkeenni Fokkataa fi Xuraayaan ilaalcha Uf-tuulu...
#OromoProtests AYYAANA IRREECHAA ILAALCHISEE XALAY...
#OromoProtests Juneeydii Saadoo gara miidiyaatti a...
Ibsa dubbii H/maariyam Dassaaleny ilaalchisee, ati...
#OromoProtests Rakkoo Siyaasaa Itoophiyaatif OPDOn...
#OromoProtests #Boycottpaarlaamaa2009, #Caffeelaga...
Aangoon Polotikaa dhugaa eessaa madda?
Seenaa gooticha oromo Jamal Harun akka armaan gadi...
Aangoon Polotikaa dhugaa eessaa madda?Aangoon Polo...
-Gumii Abbootii Gadaa Oromiyaatiif
ADDA BILISUMMAA OROMOO (OROMO LIBERATION FRONT)
Leenjii' Wayyaaneen barabaraan kennitu keessatti j...
#OromoProtests AKKAATAA DIDDAA LEENJII BARSIISOTAA...
DOORSISAA FI SHORORKEESSI BIFA GARAGARAA DALDALTOO...
#OromoProtests NO TRORIZING BUSINESS PEOPLE IN ORO...
#OromoProtests TOKKUMMAAN LAGANNEE, INJIFANNOON GO...
#FXG Fincila Xumura Gabrummaa jechuun Maal jechuud...
Me'ee Bokkoo Oromoo Gujii Seenaa Gababaa Oromoo
Baqqalaa Garbaa (1961 - ) barsiisaa Yuunivarsiitii...
Qabsoon Hidhannoo Malee (Nonviolent Resistance) Ma...
Oromiyaan Itoophiyaaf Onneedha, Oomishni isii immo...
#OromoProtests Partial List of people killed by TP...
SEENAAFI SHEENAAN NADHII GAMMADAA AKKA NUTTI HIN D...
IBSA EJJENNOO GUMII TOKKUMMAA ABBOOTII GADAA OROMO...
#Oromoprotests Fulbaana 1 Bara 2016)Gootichi Oromo...